Marii DHDUO fi ODF [OBN 26 09 2010] DhDUO fi ODF’n jijjiirama dhufaa jiru itti fufsiisuuf waliin hojjenna jedhan. – Kichuu
HomeNewsAfricaMarii DHDUO fi ODF [OBN 26 09 2010] DhDUO fi ODF’n jijjiirama dhufaa jiru itti fufsiisuuf waliin hojjenna jedhan.
Marii DHDUO fi ODF [OBN 26 09 2010] DhDUO fi ODF’n jijjiirama dhufaa jiru itti fufsiisuuf waliin hojjenna jedhan.
Marii DHDUO fi ODF: [OBN 26 09 2010] DhDUO fi ODF’n jijjiirama dhufaa jiru itti fufsiisuuf waliin hojjenna jedhan.
Dabballootni Wayyaanee EPRDF Maqaa Amantaa Dahoo Godhachuun Saamicha Lafaa Uummata Oromoo ittuma fufani jiru. Suuraan armaan gaditti argitan kun Saamichaa lafaa amantaa dahoo godhachuun Magaalaa Burraayyuu Ashawaa Meedaa bakka jedhamu Lafa diriiraa baldhinsa guddaa qabu walakkaa isaa mana sagadaa amantaa Ortodoksii fakkeessuun buufatanii jiru. Dhimmi kun dhimma uummata Oromoo hunda ilaallatudha. Waloon dhaabbatne duula waloo kallattii maraan uummata Oromoo lafarraa buqqisuun dhabamsiisuuf qiyyaafatukamuu dhura ni dhaabbatna!!
Rakkoon mana sagadaa naannoo kana hin jiru magaalaa Burraayyuu keessa qofaa manni sagadaa amantaa tokkichaa hedduutu jira, inni kun itti yaadamee saamichaa lafaa tooftaa jijjiirratee dhufe ta’uun beekamaadha!!
Yeroo darbee wal-dhabdeen waa’ee ”tabootii” plaani malee ijaarame tokko Buraayyuutti uumame ture. Lafa jijjiraa isaanif keennan. Lafnii kuni jijjiraan argatan sun ta’a jedheen qorrachuf yaale. Kuni lafa haaraa ji’uma sadeen darban kana kan uummata naannoo gowwomsani seera malee alaabaa Amaaraa itti dhobanii qabbachuf yaalaa jirani dha.
MNO imaammata ittiin bulmaata dhaabbiile amantii haaraa baasu qaba.
ልጆችዬ ዛሬ ምንማማረው ስለቅዠት ነው
በእስተርጅና ወደ ፈተና አታግባን ብሎ መፀለይ ልክ እንዲህ ጃጅተህ ስትረግጥና ስትገድል ስታስር የነበረውን ህዝብ ለህዝቤ ብለህ ትቃዣለህ ይሄ ቅዠታም ሽማግሌ ዛሬም አፉን ሞልቶ ልማታዊ ህዝቤ ሲል ምን ያህል ህሊና እንደራቃቸው ነው የተረዳሁት እስቲ ……………………ቅዠት በእስተርጅና ምን ይመስላል አዳምጡት
ህፃናት በማድደርሱበት አኑሩት
እስከ አስተሳሰቡና ጎደኞቹ ጭምር
When we are loughing you are crying for ever.
Barrii oromoo boochisanii isaan kolfaa turan baayyee xinnoo taatuus , barrii oromoon haqaafii dhugaa isaa galchatee, barabaraan gammadaa jiraatutti isaan warrii diinaa zalalam bohichaan jiraatu
China scales back investment in Ethiopia East African economy pressured by rising debt and foreign exchange scarcity
What is going On!! Esayas Jira elected as new boss of Ethiopia Football Federation